Ifayile ye-xxx.docx ayinakuvulwa kuba kukho iingxaki ngeziqulatho
Ikhaya iimveliso DataNumen Word Repair Ifayile ye-xxxx.docx ayinakuvulwa kuba kukho iingxaki ngeziqulatho
Ulwazi oluneenkcukacha malunga ne "Ifayile ye-xxxx.docx ayinakuvulwa kuba kukho iingxaki ngeziqulatho" Impazamo
Xa uvula uxwebhu lweLizwi elonakeleyo ngeMicrosoft Word 2007 okanye iinguqulelo eziphezulu, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:
Ifayile ye-xxx.docx ayinakuvulwa kuba kukho iingxaki kwimixholo.
(Iinkcukacha: Ifayile yonakele kwaye ayinakuvulwa.)
apho 'xxx.docx' yifayile yoxwebhu lweLizwi elonakeleyo.
Cofa iqhosha u "Kulungile", uza kubona umyalezo wesibini wemposiso:
Igama lifumene umxholo ongafundekiyo kwi-xxx.docx. Ingaba ufuna ukufumana kwakhona imixholo yolu xwebhu? Ukuba uyathemba imvelaphi yolu xwebhu, cofa u-Ewe.
Cofa kwindawo ethi “Ewe” ukuze iLizwi libuyise uxwebhu.
Ukuba iLizwi liyasilela ukulungisa uxwebhu olonakeleyo, uya kubona umyalezo wesithathu wemposiso. Isizathu esineenkcukacha siya kwahluka ngokuxhomekeka kwiimeko ezahlukeneyo zorhwaphilizo, umzekelo:
(Iinkcukacha: IOfisi kaMicrosoft ayinakuvula le fayile kuba ezinye iindawo zilahlekile okanye azisebenzi.)
Apha ngezantsi kukho iisampulu zesikrini semiyalezo yempazamo:
Cofa u “Kulungile” ukuvala ibhokisi yemiyalezo.
Xa amanye amalungu oxwebhu lweLizwi onakele, uya kufumana le miyalezo yempazamo ikhankanywe apha ngasentla. Kwaye ukuba urhwaphilizo lukhulu kwaye iLizwi alinakuyifumana, unokusebenzisa imveliso yethu DataNumen Word Repair ukulungisa uxwebhu lweLizwi kunye nokusombulula le mpazamo.
Ngamanye amaxesha iLizwi liya kuba nakho ukubuyisela umxholo wokubhaliweyo kuxwebhu olonakeleyo, kodwa eminye imifanekiso ayinakufunyanwa. Kwimeko enjalo, unokusebenzisa kwakhona DataNumen Word Repair ukubuyisa imifanekiso.
Umzekelo wefayile yoxwebhu lweLizwi elonakeleyo Ifayile ifunyenwe ngu DataNumen Word Repair